ASUS ZenBook Pro UX550 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည် Gadget သတင်း
ASUS သည်လက်တော့ပ်ဈေးကွက်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးအတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်အတွက်မဆိုထုတ်ကုန်များကိုရှာနိုင်သည်ကွန်ပျူတာကိုရုံးသုံးအလိုအလျောက်လိုချင်သူများ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ အီးမေးလ်များကိုဖြေဆိုခြင်းစသည်တို့မှတောင်းဆိုမှုများအထိ။
စပိန်နိုင်ငံတွင်ပေါ်ထွက်လာမည့်နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်မှာ Computex ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအမည်ပေးခဲ့သည် ASUS ZenBook Pro UX550။ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လှပတဲ့ဒီလက်တော့ပ် - သူ့ရဲ့ဘောင်တွေဟာအလွန်သေးငယ်တယ်၊ ကီးဘုတ်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအပြင်အဆင်ရှိပြီးလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပါးလွှာသောကိုယ်ထည်ရှိပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
ASUS ZenBook Pro UX550 သည်အမျိုးအစားများအတွင်းတွင်နေရာချနိုင်သည် ultrabook များအမှန်တကယ်ဖြစ်သော်လည်းဤကဏ္inတွင်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည်များသောအားဖြင့်သေးငယ်သည်။ ထိုင်ဝမ်မော်ဒယ်တစ် ဦး ရှိပါတယ် 15,6 လက်မထောင့်ဖြတ် panel ကို.
ဤ ASUS ZenBook Pro UX550 ၏နောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ၎င်းကိုဖြစ်သည် မျက်နှာပြင် resolution သည်စံနှုန်းသစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည် - 4k။ ဒါ့အပြင်ပါဝါအားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Intel Core i7 ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်ထားလို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သတ္တမမျိုးဆက်မဟုတ်ဘဲအချို့ကိစ္စတွေမှာရှစ်ကြိမ်မြောက်မဟုတ်ဘူး။ RAM memory သည် 16 GB ထိရှိနိုင်ပြီးသိုလှောင်မှုကို 256 or 512 GB (SSD နှစ်ခုစလုံး) နှစ်မျိုးဖြင့်ပေးထားသည်။
ASUS ZenBook Pro UX550 ၏ဂရပ်ဖစ်အပိုင်းသည်လက်တစ်ဖက်မှလာသည် NVIDIA®GeForce® GTX 10504GB GDDR5 ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်ပါသည့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုကတော့အထူးသဖြင့်သွားလာရင်းအလုပ်လုပ်သောသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၁၄ နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ၄၉ မိနစ်အတွင်းစုစုပေါင်းအားသွင်းမှု၏ ၆၀% ကိုရရှိရန်လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည်။
ဤ ASUS ZenBook Pro UX550 တွင်နာမည်ကြီး Harman Kardon အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစပီကာများပါရှိသည်။ စွန့်ပစ် လက်ဗွေစာဖတ်သူနှင့်သဟဇာတ Windows ကိုမင်္ဂလာပါ နှင့် HDMI, USB-C, SD ကဒ်ဖတ်စက်၊ မြန်နှုန်းမြင့် WiFi နှင့် Bluetooth ၄.၂ ကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်းအမျိုးမျိုး။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏အာရုံကိုဖမ်းမိပါကသင်၏အိတ်ကပ်ကိုပြင်ဆင်ပါ ၎င်း၏ရောင်းစျေးနှုန်း 1.749 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » လက်တော့ပ် » ASUS ZenBook Pro UX550 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
ပိုမိုကောင်းမွန်သော HDMI ဆက်သွယ်မှုကို 2.1 စံအသစ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်